Ka warheyn iyo ku yeelan saameynta - Örnsköldsviks kommun
- Ka warheyn iyo ku yeelan saameynta
Adiga oo bulshada degmada kamid ah waxaa xaq u leedahay ka warheyn quseeyso arrimaha degmada. Adiga waa ka qeyb-qaadankarta waraaqaha quseeyo degmada iyo talooyin waad u soo bandhigikarta siyaasiinta degmada.
Ka soo qeyb-gal oo dhageyso kulamada goobta degmada
Kulamada goobta degmada weey u furanyahiin dhammaan bulshada. Adiga waa imaankarta oo ka qeyb-qaadankarta goobta degmada oo guriga degmada oo ciwaankiisa yahay Nygatan 16 ama toos kala soconkarta bogga internetka oo degmada, kulanka waxaa la qabtaa bilkasto isniinta ugu dambeyso, saacado markey tahay 13:00.
Inta kulanka goobta degmada iyo kulanka guddiyada uusan dhicin ka hore waxaa bogga internetka oo degmada la soo galin waraaqaha kulanka. Waraaqaha qaarkood waxaa dhicikarto in la soo galin haddii ey ku qoran tahay warbixin qof shaqsi iyo warbixinta ey tahay mid aanan quseyn bulshada guud. Markaas warbixintaas waxey hoos imaan sharciga sirta.
Qoraalka oo kulanka goobta degmada, guddiga degmada iyo guddiyada degmada qofkasto baa akhrisankaro. Qoraalkaas waxaa laga heli bogga internetka oo degmada iyo waxaa laga dalbankara gacanhayaha guddiyada.
Talo soo gudbi
Adiga ka diwaangalisan inaad ku nooshahay Örnsköldsvik waxaa soo gudbin kartaa talo oo lagu magacaabo talada muwaadiinta, oo waxaa u soo diri goobta degmada, oo waa haddii ey jiran wax aad is leedahay iney fiicnaan leheed in goobta degmada ey go’aamiso.
La soo xiriir xildhibaanada
Adiga siyaasiinta waxaa kala soo xiriiri karta telefoonka, waa soo booqankarta ama e-mail baa u soo diri karta. Lambarka guud oo degmada: 0660-880 00, baa ku caawin oo kugu xiriirin qofka aad raadineysid. Sidaan waaye nidaamka ciwaanka e-mailka oo siyaasiinta iyo shaqaalaha degmada: fornamn.efternamn@ornskoldsvik.se